Jery taratra… herinandro : fahantrana sy fahasahiranana lava… | NewsMada
Jery taratra… herinandro : fahantrana sy fahasahiranana lava…
Ampolony ny maty tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo, analina ny isan’ny traboina. Ankoatra ireo, miakatra ny sasany amin’ireo renirano lehibe, ao ny fefiloha vaky etsy sy eroa… Mbola loza manambana na efa mihatra amin’ny sasany tsy maintsy atrehina izay tondradrano izay.
Nisy ny fotoana tsy niasana sy tsy nianarana, arakaraka ny fiavian’ny rivodoza isam-paritra. Saika foana ary nahemotra avokoa ny hetsika fankalazana ny 8 marsa, Andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy. Na izany aza, nisy ihany ny vondrona politika nizara fanomezana ho an’ny vehivavy.
Manao rodobe mitsidika sy mizara fanampiana ireo traboina ny fitondram-panjakana. Tsy mizarazara arakaraka izay departemantany avy ireo ireo. Manao fanararaotana politika? Na miseho ho mitsinjo vahoaka, fanarenana ny fitokisan’ny vahoaka… Misy ny fanindrahindrana olona manokana.
Aiza izay tena vonjy rano vaky ataon’ny mpitondra fanjakana isan’ambaratonga sy isan-tsehatra amin’ny fefiloha vaky etsy sy eroa, ny traboina mihahaka tsy mahita izay hosarangotina, ny fitodrafidrasa tra-pahavoazana… ? Tsy hita izay tena vokatra mivaingana amin’ny rodorodobe.
Niantso fanomezan-tanana ireo traboina noho fahamaizan’ny tanàna any Antsakabary, Befandriana Avaratra, ny Fivondronamben’ny eveka. Tokony handraisana andraikitra ny firongatry ny hatezeram-bahoaka. Miantso fifanatonana sy fifamelana ny FJKM, vonona ho mpampihavana.
Manameloka fihetsika baribarian’ireo polisy tsy tan-dalàna tany Antsakabary ny “Vovonana mampiray“. Ambarany fa fanitsakitsahana ny zon’olombelona izany: valifaty sy fitsaram-polisy. Anaovany antso ny fanonerana ireo niharam-pahavoazana, ny fepetra ho an’ireo nahavanon-doza.
Fahantrana sy fahasahiranana lava ny an’ny vahoaka: ny fananana rava; ny kely sisa, ahina amin’ny mpanao latsaka alina; ny asa tsy misy tokotaniny, fa izay hanina anio tadiavina anio… Tsy mila porofo fa mihamahantra hatrany ny vahoaka. Ahina koa ny fiakaran’ny vidin-javatra, ny vokatra potika…
Mahefa ve ny mpitondra?
Education : Adrien Melvin visite des EPP 26/11/2020
Violences basées sur le genre: Mialy Rajoelina dit « Stop » aux violences contre les femmes 26/11/2020
Nutrition au travail: mise en œuvre du programme à Toamasina 26/11/2020